Apple dia mandefa ny kinova OS X El Capitan 10.11.6 | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka kinova vaovao an'ny OS X El Capitan 10.11.6
Roa volana no naka ny an'ny Cupertino hamoaka izay dikan-teny vaovao an'ny OS X El Capitan, manokana ny kinova 10.11.6, kinova izay tonga fotsiny hanitsiana ny lesoka, manao fikojakojana amin'ny fitaovana sasany ary manatsara ny fahombiazana, ao anatin'ny inona no mifanaraka.
Raisina an-tsaina fa amin'ny volana septambra dia rehefa hamoaka ny vaovao i Apple macOS Sierra, kinova 10.11.6 izay horesahintsika ato amin'ity lahatsoratra ity no ho andrasana farany amin'ity rafitra ity ary Apple izany hanidy ny programa izy io raha hanary ao amin'ny macOS Sierra vaovao.
Rehefa milaza aminao izahay fa hanidy ny fandaharana ho an'ity rafitra ity i Apple, dia tsy te-hiteny aminao izahay hitahiry izany ao anaty vatasarihana ary tena hanadino izany izahay ary havaozina ny fampiharana toa ny browser Safari na iTunes rehefa avoaka izy ireo. fitaovana finday vaovao ary miseho ny fandrahonana fiarovana, manome vahaolana ireo injeniera ao Apple.
Ny hijanona amin'ity kinova ity dia ny fampidirana fitaovana sy fitaovana ho an'ny roe hahafahana manary azy ireo ao amin'ny macOS Sierra manomboka amin'ny volana septambra. Fantatrao izao, manomboka anio dia azonao atao ny manaova ilay kinova vaovao an'ny OS X 10.11.6 izay ho farany amin'ny tantarany ary izay ho fantatra amin'ny hoe talohan'ny macOS dia hiverina amin'ny fiainantsika aorian'ny taona maro.
Araka ny efa fantatrao, raha te hametraka ity kinova vaovao ity dia mila tsotra fotsiny ianao ampidiro ny App Store amin'ny Mac ary eo no hamarotanao azy eo noho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Apple dia namoaka kinova vaovao an'ny OS X El Capitan 10.11.6
franrlmobile dia hoy izy:
Salama, ny iMac faramparan'ny 2013 misy fotoana miadana ary indraindray rehefa manomboka aho dia manipy fotoana vitsivitsy ary amin'ny farany dia misy fambara voarara mivoaka ary tsy manomboka. Amin'ity fanavaozana ity mety ho voalamina ve ny olana sa mety ho olana momba ny kapila mafy kokoa? Nandalo ny Onyx sy ny antivirus aho ary mitohy ny olana. Misaotra sy arahaba.
Mamaly an'i franrlmobile
Salama, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao. Manana retina MacBook Pro vaovao aho, miaraka amin'ny OS X El Capitan ary niato nandritra ny 2 andro ny fizotran'ny enkripsi (miaraka amin'ny adapter herinaratra mifandray). Niezaka ny hanajanona ny FileVault aho saingy mahazo varavarankely izay milaza hoe: FileVault dia manafina ny angon-drakitra ao amin'ny kapilao. Ny fanontaniana dia izao: misy ve ny mety hamaha ity hetsika miato ity? Hafiriana no tokony hiandrasako?
Manantena aho fa afaka manampy ahy izy ireo.
Valiny tamin'i Arnold
Beta fahatelo an'ny watchOS 3 azo alaina ho an'ny mpamorona
Tsy mahita trackpad ny IMac